देउवाले किन दिए निधिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी ? यस्तो छ भित्री कारण - Deshko News Deshko News देउवाले किन दिए निधिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी ? यस्तो छ भित्री कारण - Deshko News
देउवाले किन दिए निधिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी ? यस्तो छ भित्री कारण
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू भारत भ्रमणमा निस्कँदा पार्टीको कार्यभार नेता विमलेन्द्र निधिलाई सुम्पेका छन् । पार्टी बागडोर सम्हालेको डेढ वर्षसम्म पार्टी पदाधिकारीदेखि विभाग गठन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका देउवाले पार्टीका अन्य गुटको नाडी छाम्न निधिलाई कार्यवाहक दिएको चर्चा चलेको छ ।
निधि देउवाको विश्वासपात्र मानिन्छन् । नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति विवादमा देउवा र निधिबीच मनमुटाव बढेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ।